Ọnwụnwa Ekwensu - ysmụ nwoke --hụnanya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Ọnwụnwa Ekwensu nkezi 4.1 / 5 si 52
NA / A, o nwere ihe nlere 95.3K
Adult, Comedy, Ebube, Yaoi
Hyun kwesiri itinye ugburu ekeresimesi ya na ugbo ala ya n'elu akwa nkpuru ya na-ekiri Tv. N'afọ a, agbanyeghị, ọ kpebiri ịga nnọkọ ezumike ụlọ ọrụ ya iji mee ka ịdị adị ya mara ọfịs ya - ọ na-akụda mmụọ ọjọọ Alek-mana kama, na-agbada ọtụtụ mmanya, na-eme onwe ya nzuzu, ma na-apụ apụ. N'ụtụtụ nke ụtụtụ, ọ na-eteta na nro nke Krismas: dinara n'akụkụ ya ma gba ọtọ bụ onye ọrụ ibe ya jọgburu onwe ya, Ivan Mariani. Hyun akpọwo ihe niile gbasara Ivan asị. Yabụ kedu ihe kpatara Ivan na mberede jiri dị iche iche… na-esi isi ọma… wee na-enwusi ike agụụ mmekọahụ?
Nwere ike ịchọpụta ọtụtụ yaoi animes
Isi nke 57 Ọgwụgwụ ss1 February 16, 2021
Chapter 1 Enweghị isi
Ezigbo No Heroine Wa Irimasen!
Xlọ akwụkwọ X